Galkacyo Waa Magaalo Madax ka Muuqata Gobolada Dhexe
Buluugleey, Thursday, September 29, 2005
Waxaa dhawaan magaalo madaxda Mudug isku qabsaday garoonka dayuuradaha ee maagalada laba maleeshiyo beleed oo ka soo kala jeeda Bari iyo Mudug. Wuxuuna isqabsigaas ka dhashay in garoonka uu noqdo mid u dhexeeya dadka wada dega magaalada. Waxaana fikradaas diidan beesha ka soo jeeda Bari.
Gaalkacyo waa magaalo taariikh ahaan ay Soomaalidu ka kicisay dadkii loo yaqaan Gaalaha oo ka soo jeedey Oromada iyo Danakiisha ama Cafarta. Marka dagaaladaas lagu kicinayey Gaalada ay dhacayeen beelaha hadda degan Bari ma ahayn kuwa ka jirey dalka Soomaaliya. Degaanka Mudug waxaa weligiis degenaa dadka hadda u badan gobolka oo Hobyo ay u ahayd magaalo, meesha Gaalkacyo ay ahayd ceel iyo bali biyo galena
Gaalkacyo waxey isku bedeshey magaalo wakhti aad u dhow oo ay taariikhdu ahayd 1907. Dadka dega Hobyo ayaa wanaag badan abuuray, waxeyna abbayaashood ku talaabsadeen iney soo dhoweeyaan dad ka soo barakacayey gobolka Bari oo dhibaato ay ka heysatey dhinaca biyaha iyo baadka.
Dadka dega Gaalkacyo oo u badan dad iska dhala ayaa waxey ahaayeen xiddigaha ka muuqda goboladda dhexe marka laga fiiriyo dhinaca is dhexgalka iyo dhinaca fikirka oo ay ka mideysnayeen. Waxey ahyd beesha degta Hobyo kuwii ka dambeeyey in Madaxweynihii Cabdirashiid Cali Sharmarke uu noqdo Madaxweyne iyagoo maal iyo dadaal siyaasadeedba u galay sidii ay u hirgelin lahayeen madaxtinimadiisa.
Maanta Gaalkacyo waxaa loo kala degen yahay, koofurta magaalada oo ay degen yihiin dadkii u dhashay degaanka iyo waqooyiga oo ay degen yihiin dadkii ka soo qaxay gobolka Bari. Dhibaatada ugu weyn waxey ka taagan tahay qolooyinka degan waqooyiga oo magaalda milkiyadeeda isisiiyey, doonayana magaalada iney ku daraan degaanada looga taliyo gobolka Bari.
Magaalda garoonka ku yaala oo keliya ayaa wuxuu gacanta ugu jiraa beesha degta waqooyiga inkasto degaanka uu ku yaalo garoonku u yahay dhinaca koofurta. Dhaqaalaha ka soo baxa garoonka ayaa wuxuu sababay in koofurta iyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo ay kala dhaqaalo roonaadaan, taas oo sababtay in adeegyada ay u baahan yihiin dadweynaha ay ka socdaan oo keliya dhinaca waqooyi meesha koofurta aad u moodid ineysanba waxba ka jirin.
Dadka u dhashay degaanka ayaad hadda moodaa iney arrinta ku soo baraarugeen oo ay arkeen in magaalada ay gacantooda ka sii fara baxeyso. Codsiyo badan oo ay dhanka kale kaga dalbanayeen in si sinaana wax loo qeybsado ayaan laga dhageysan, sidoo kale ayaa magaalada Gaalkacyo waxaa ku magac roon dhinaca waqooyiga oo gacanta ku haya xiriirka ay magaaladu la leedahay dibeda iyo gudahaba
Gaalkacyo waa magaalo ka iftimeysa gobolada dhexe, degaan ahaana waxey ka tirsan tahay gobolada dhexe sida Hiiraan iyo Galgaduud. Degaan balaarsiga ka socda xukunka ka soo jeeda Bari iyo dadka laga tirada badan yahay ee ka soo jeeda Bari intuba magaalada waa ineysan ka saarin dhexdhexaadnimada ay raaliga ka yihiin dadka u dhashay degaanka. Haddi taas la waayo waxey dhibaatada inteeda badan ay ku dhaceysa beesha qaxootiga ku ah degaanka, waxeyna ku dambeyn doonta magaaladu in lagu kala guuro sida horay uga Dhacday Xamar markii uu qarxay dagaalkii sokeeye.